राजवृक्ष | Our Dream City राजवृक्ष – Our Dream City
अङ्ग्रेजी नाम: Golden shower flower/Indian Laburnum
राजवृक्ष पूर्वी एसिया र भारतीय उपमहाद्वीपमा पाइन्छ। यो पूर्वी अफ्रिका सहित अन्य उष्ण क्षेत्रहरूमा अनुकूलित गरिएको छ। नेपालमा यो तराईदेखि १२०० मिटरसम्मको कम उचाइमा पाइन्छ। उत्पत्तिस्थल कम उचाइको सुक्खा अर्ध–पतझर वन र खुला वन एवं घाँसे मैदान रहेको हुन्छ।
परिपक्व अवस्थामा उचाइः यो १०–१५ मिटरसम्म अग्लो बढ्न सक्छ। काण्ड ४०–५० सेन्टिमिटर व्यासको हुन सक्छ।
आकारः राजवृक्ष खुल्ला वृक्षछत्र भएको मझौला आकारको रूख हो र पतझर भएतापनि यो कहिल्यै पूर्णतया पातरहित हुँदैन। पातहरू मिश्रित र ३०–६० सेन्टिमिटर लामो हुन्छन्। ती धेरै ठूला अण्डाकार आकारका ४–६ जोडी पत्रहरूमा विभाजित हुन्छन्।
फूल र फूल फुल्नेः अप्रिल–मेमा फुल्ने फूल चम्किलो पहेँलो हुन्छ। फूल ठूला र आकर्षक हुन्छ। फल बेलनाकार कोसामा रहेको हुन्छ। फूल फुल्ने समय सम्पूर्ण वृक्षछत्र फूलले ढाकेको हुन्छ; छिटपुट फूल फुल्ने क्रम ३ महिना सम्म जारी रहन्छ।
खेतीः बिरुवाहरू सुख्खादेखि ओसिलो उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रमा फस्टाउछन्, जहाँ वार्षिक वर्षा ५००–२७०० मिमि र औसत वार्षिक तापमान १८–२९ डिग्री सेल्सियस हुन्छ। बिरुवाहरू ढिलो–बढ्छन् र सामान्यतया रोपणदेखि फूल फुल्न ८–१० वर्ष लाग्छ। यो अवधि वानस्पतिक प्रसारणद्वारा घटाउन सकिन्छ।
माटोः यो बिरुवाले गहिरो, राम्रो निकास भएको, केही मात्रामा उर्वर बलौटे दोमट माटो र पूरै घाम लाग्ने स्थान मन पराउँछ। यसले क्याल्शियमयुक्त र रातो ज्वालामुखी माटोलाई मन पराउँछ, तर ५.५–८.७ को पिएच भएको बलौटे र दोमट माटोमा पनि पाइन्छ। यसले केही छाया सहन सक्छ। बिरुवाहरू धेरै हदसम्म खडेरी प्रतिरोधी हुन्छन्।
बिरुवाको प्रसारण बीजद्वारा गरिन्छ। बीजहरूमा कडा आवरण हुन्छ र कम्तिमा ४५ मिनेटको लागि यन्त्रद्वारा बीजको आवरणलाई कमजोर पारेर वा कन्क सल्फ्यूरिक एसिडको प्रशोधनद्वारा अङ्कुरण सुधार गरिन्छ। तातो पानीमा १२–२४ घण्टा अगावै भिजाएर पनि प्रयास गर्न सकिन्छ। बीज पूर्ण प्रकाशमा रोप्नु पर्छ, र अधिकतम अङ्कुरणको लागि पर्याप्त पानी आपूर्ति आवश्यक छ। बीजले पानी सोसेर वजन तीन गुणासम्म बढ्न सक्छ। अङ्कुरण केही दिन भित्र हुन्छ। प्राय: सोझै रोपण अभ्यास गरिन्छ। जीवन क्षमतामा कुनै क्षति नभई बीज लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ। काठ परिपक्व अवस्थामा नपुगेको रूखबाट कटिङ गरेर पनि यसको प्रसारण गर्न सकिन्छ।
राजवृक्षको काठ भवन, गाडा, बार पोस्ट, र कृषि उपकरणमा प्रयोग गरिन्छ। बीजकोषमा लेसाइलो पदार्थ हुन्छ जसमा विभिन्न औषधीय गुणहरू हुन्छन्। काठलाई उत्कृष्ट कोइला र काठको सारका लागि विभिन्न औषधिहरू बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै बोक्रालाई टेनिङ र रङ्ग गर्न प्रयोग गरिन्छ।
Satyal, P., Dosoky, N. S., Poudel, A., & Setzer, W. N. (2012). Essential oil constituents and their biological activities from the leaves of Cassia fistula growing in Nepal. Open Access Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 3(2), 1.